Bogga ugu weyn Faallooyinka Gamekit 2022: Waa maxay Gamekit | Siduu U Shaqeeyo
Ma waxaad tahay qof jecel ciyaar jecel oo jeclaan lahaa inuu kasbado dhibco ama kaararka hadiyadda isagoo ciyaaraya ciyaaro cusub? Hagaag, xirmada Ciyaaruhu waa adeeg kuu oggolaanaya inaad haysato intaas oo laga yaabo inay intaas ka badan tahay.
Dib -u -eegista Gamekit ayaa la isku daray si ay kaaga caawiso inaad si fiican wax u fahamto oo aad uga jawaabto su'aalahaaga sida "Waa maxay Gamekit?"
Gamekit waa madal ciyaar oo u ballanqaadaya isticmaaleyaasheeda abaalmarinno sida kaararka hadiyadda ah oo ay ku ciyaaraan uun. Adeeggan muranka badan wuxuu u dhaqmaa sidii qalab suuqgeyn loogu talagalay sumadaha raadinaya dhagaystayaasha si ay u tijaabiyaan cayaarahooda.
Waxay noo sheegaan in faa'iidooyinka laga helo heshiisyada lala wadaago ciyaartooyda qaab dhibco ah.
Haddii tani run tahay iyo haddii kaleba, ma bixin karno go'aan.
Laakiin waxa aan sameyn karno ayaa ah in la qoro dib -u -eegista xirmada ciyaarta oo ku saleysan baaritaanno taxane ah iyo xaalado aad u yar.
Maqaalkani wuxuu daboolayaa dhammaan murannada ku xeeran Gamekit wuxuuna kaa caawinayaa inaad go'aansato haddii ay tahay mid sharci ah ama khiyaano.
Intaas ka hor, fiiri jadwalka dulucda hoose.
Waa maxay Gamekit?
Xirmada Ciyaaruhu waa madal lagu daawado fiidiyowga onlaynka ah in ka badan 30 dal oo isku xira sumadaha raadinaya dhagaystayaasha ciyaaraha iyo ciyaartooyda adduunka.
Si tan loo sameeyo, sumadaha doonaya inay erayga ka soo saaraan cayaarahooda waxay bixiyaan gamekit si ay u gaaraan dhagaystayaasha. Xirmada ciyaarta markeeda waxay siisaa ciyaartoydan iyagoo siinaya dhibco ay ku ciyaaraan kulamadan.
In ka badan 15 milyan oo isticmaale, gamekit ayaa caddeeyay in nidaamkeeda dhibcaha lagu abaalmariyo ay tahay mid sharci ah oo adeegsadayaashu waxay ku beddeli karaan dhibcaha abaalmarinno ama wax kasta oo laga heli karo goobta sida hargaha, ciyaaraha buuxa, iyo lacagta ciyaarta. Dhiirrigelintani waxay kordhisaa taraafikada dhinaca ciyaarta ama mareegaha guud ahaan.
Hadda, xirmada Ciyaaruhu waxay noo sheegaysaa inay runtii abaalmarin siiyaan ciyaartoy. Waxaa jiri kara in ka badan ama ka yar. Goor dambe ayaan ogaan doonaa Laakiin hadda, aan aragno sida ay u shaqeyso.
Sidee buu u shaqeeyaa xirmada Ciyaaruhu?
Si aad u ogaato sida gamekit u shaqeyso, waa inaad marka hore soo dejisaa oo rakibtaa xirmada xirmada ciyaarta. Markaad is -qorto, waxaad bilaabi kartaa inaad hesho dhibco isla markiiba.
Si tan loo sameeyo, tag bogga “kasbashada dhibcaha” oo dooro mid ka mid ah xulashooyinka badan ee dhibcaha kasbashada.
Ka dib, waxaa laguu soo bandhigi doonaa liiska tallaabooyinka kala duwan ee ay tahay inaad qaaddo si aad u dhammaystirto hawshaada oo aad u hesho dhibco. Tani way kala duwan tahay iyadoo ku xiran ciyaarta aad doorato inaad ciyaarto. Xaaladaha qaarkood, waxaad u baahan doontaa inaad tusto caddaynta dhammaystirka hawl muujinaysa horumarkaaga.
Markaad dhammayso hawshaada, waxaad ku heli doontaa abaalmarintaada qaab dhibco (PTS) iyo barta khibradda (EXP). Waxaad dooran kartaa inaad ku beddesho abaalmarintaada dhibco, halka 'EXP' ay kaa caawineyso inaad kordhiso heerka koontadaada.
Qaar ka mid ah adeegsadayaasha ayaa sheegaya in astaantani ay wanaagsan tahay maxaa yeelay waxay si dadban kugu qasbeysaa inaad dhammaystirto howlahaaga adoo xaddidaya gelitaanka ciyaaraha qaarkood. Adigoo ah kuwa jecel ciyaaraha fiidiyaha, miyaadan rabin inaad ciyaarto ciyaaro badan intii suurtogal ah xannibaad la'aan?
Dhimashada ilaa meeshan ayaa ah xitaa haddii aad haysato qaddarka loo baahan yahay ee PTS ee abaalmarin, haddii aadan haysan EXP ku filan, ma soo furan kartid ilaa aad gaarto heerka loo baahan yahay.
Tani waxay dhalisay khilaaf badan oo ka dhex jira isticmaaleyaasha iyadoo qaar ay dareemayaan inaan loo baahnayn oo kaliya ayaa kaa hor istaagaya inaad furato PTS -gaaga. Tani waxay noo horseedaysaa dooddeena xigta.
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska Lacag La Siin Si Aad U Ciyaarto Ciyaaraha: Meelaha Ciyaaraha Ugu Fiican
Sida Loo Helo Qodobbada Gamekit
Horaan waxaan u sheegnay inaad bilaabi karto inaad hesho dhibcaha isla marka aad iska qorto xirmada Game. Aan eegno dhowr siyaabood oo aad dhibco uga heli karto xirmada ciyaarta ee hoose:
U dir saaxiib (tixraac)
Hababkaas oo dhan, cayaarista ciyaartu waxay u muuqataa inay tahay habka ugu caansan ee dhibcaha loogu helo xirmooyinka ciyaarta.
Xirmada Ciyaartu Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Su'aasha ah “Xidhmada Ciyaartu ma xalaal baa mise waa khiyaamo?” waa inay noqotaa su'aasha ugu muhiimsan ee dib -u -eegista ciyaarta. Runtu waxay tahay in gamekit -ku uusan ahayn mid sharci ah ama khiyaamo ah. Hayso, ma dhahayo waa isdabamarin guud laakiin waa mid sharci ah sida ay u noqon karto khiyaano.
Aan ku tuso kala -jajabinta qaar ka mid ah shuruudaha keena xukunkeyga. Adiga ayaa go'aamin kara midka uu yahay- mid sharci ah ama khiyaano ah.
#1. Adeegyo Wanaagsan
Gamekit waa adeeg wanaagsan oo kuu oggolaanaya inaad kasbato dhibco aad ku beddeli karto kaararka hadiyadaha kala duwan iyo furayaasha ciyaarta. Isticmaalayaasha qaarkood oo la weydiiyay inay sugaan inta u dhexeysa 2 illaa 4 toddobaad kaarkooda Eurocard ayaa helay 2 maalmood ka dib. Qaarkood waxay isla markiiba heleen kaarkoodii hadiyadeed ee uumiga.
#2. Dhibcaha Fair Trustpilot
Trustpilot waa degel lagu kalsoon yahay oo dib u eegis lagu sameeyo iyo xirmada ciyaarta ayaa leh dhibcaha Trustpilot ee 3.8 taas oo ku filan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtogal ah in shirkaduhu wax ka beddelaan dhibcaha dib -u -eegista markaa waxba ma aha wax la hubo.
#3. Waxay bixiyaan dhibco iyo abaalmarin.
Xirmada ciyaarta waxay siisaa dhibco iyo abaalmarin isticmaaleyaasheeda. Si kastaba ha noqotee, dhibcaha qaarkood ee aad kasbato ayaa laga yaabaa inaysan ku siin ciyaar u qalantay dhammaan dadaalkii aad gelisay dib u soo celinta dhibcaha. Tani waa sababta ay tahay inaan uga hadalno dhinaca khiyaanada ee gamekit.
Qasaarooyinka xirmada Ciyaarta
Nasiib darro, waxaa jira dhinacyo ka xun marka loo eego dhinacyada wanaagsan marka laga hadlayo Gamekit. Qaar ka mid ah dhaqamadii ganacsi ee xumaa ee ay qaateen ayaa yareeyay khibraddii isticmaalaha. Taas oo iyaduna meesha ka saarta dadka adeegsada.
Aynu eegno qaar ka mid ah dhinacyada khiyaanada ee gamekit -ka hoose.
#1. Siyaasadda Qodobka aan Caddaaladda ahayn iyo Mamnuucidda
Markii isticmaaleyaashu kasbadeen dhibcaha loo baahan yahay si ay u ciyaaraan ciyaar gaar ah oo ay codsadeen inay ku beddelaan dhibcaha abaalmarinno, gamekit waxay xireen akoonkooda iyagoo ku saleynaya khiyaano iyo falal sharci darro ah. Xusuus -qoryada qaarkood ayaa la arkaa halkan iyo halkan.
Xitaa ka dib markii isticmaaleyaashu muujiyeen caddeyn ah in pint -ka si daacad ah loo kasbaday, Gamekit kama noqon go'aankooda.
Hadda qof dadaal badan u galay inuu helo dhibicdaas, tani gebi ahaanba waa caddaalad darro. Ficilkani wuxuu dhigaa gamekit -ka iftiiminta inuu yahay khiyaano.
#2. Ciyaaraha u dhigma
Tiro aad u badan oo adeegsada xirmooyinka ciyaarta ayaa sheegaya in ay helaan isla cayaarahan marka ay iibsanayaan furayaasha uumiga ee loo yaqaan “random”. Gamekit gabi ahaanba wuu ka warhayaa tan waxna kama qabto.
Tirada dadka hela cayaaraha nuqulku waxay meesha ka saarayaan xaqiiqda ah in furayaashan uumiga ahi runtii yihiin “kuwo aan kala sooc lahayn”. Qaar ka mid ah adeegsadayaasha ayaa sheegaya inay yihiin uruurin kooban oo ah ciyaaro duug ah oo aan la jeclayn.
#3. Dadaal Dheer oo leh Abaalmarin Aan La Qummanayn.
Qiimaha abaalmarinta ay bixisay gamekit uma qalanto dadaalka loo galay dib u soo celinta abaalmarinta maadaama qiimaha abaalmarintu uu aad u hooseeyo marka la eego xaddiga PTS loo baahan yahay.
#4. Isbeddellada aan caadiga ahayn ee Shuruudaha
Waxyaabo kale oo dhigaysa gamekit -ka meesha inay tahay khiyaano waa dhaqan -xumadeeda iyo isbeddel aan joogto ahayn ee shuruudaha u -qalmitaanka abaalmarinta.
Qaar ka mid ah adeegsadayaasha ayaa ka cawda in isla marka ay gaaraan heerkii loo baahnaa si ay u soo ceshadaan dhibcihii, xirmada ciyaarta ayaa beddeleysa shuruudaha. Markii daryeelkii macmiilka lala xiriiray, ma aysan hayn macluumaad la taaban karo oo ku saabsan sida loo saxo arrinta.
Waxay xitaa u sii gudbayaan inay ugu hanjabaan isticmaaleyaasha “sida la sheegay inay faafiyeen warar been abuur ah oo ku saabsan boggooda”. Tani waxay muujineysaa sida gamekit -ku isku dayayo inuu qariyo dib u eegista xun ee ay leeyihiin.
#5. Ka saarida Qaar ka mid ah Sifooyinka Rafcaanka ah
Gamekit wuxuu si tartiib tartiib ah uga saaray qaar ka mid ah astaamihiisii ​​sida tartamadii iyo deeq -bixinnadii ay isticmaaleyaal badani ku farxeen iyada oo aan wax xog ah oo la -socodsiin kara isticmaaleyaasheeda. Waxay xitaa tageen ilaa ay kordhiyeen qiimaha abaalmarinta.
Waqtigan xaadirka ah, haddii aad wali dooratid kitkit, waxaan u malaynayaa inaysan jirin wax saamayn kara go'aankaaga. Oh, xaji! Waxaan u malaynayaa inay wax dhici karto, aan eegno dib -u -eegista qaar ka mid ah isticmaaleyaasha xirmada Game -ka sanado badan.
Sidoo kale tan eeg 17 Fikradaha Habeenkii Ciyaarta Runtii Waa Madadaalo.
Faallooyinka Gamekit iyo Qiimeynta
Xirmooyinka ciyaarta ayaa abaalmarinaya dhibicduna waxba ma aha haddii isticmaaleyaashu aysan ku faraxsanayn sida nidaamku u shaqeeyo. Dad badan oo adeegsada xirmada ciyaarta adduunka oo dhan ayaa wax badan ka sheegaya appkakit.
Bal aan dhawr ka mid ah hoos ku eegno.
Taageerada Macmiilka Gamekit waa qashin buuxa! 0/10! Waxaan ka helay goobtooda calaamado kuwaas oo markii dambe noqday kuwo la damiyey sidaa darteed waan la xiriiray, ka dib waqti dheer oo aan la sheekaysanayay daadihiye, ugu dambayntii wuxuu yiri “Waan eegi doonaa. Waan baari doonaa, waxaan la hadli doonaa kormeeraheyga ”Waxay ka soo wareegtay bil! Farriimo ayaan dirayay laakiin jawaab uma hayo. 0/10- Isticmaal Reddit - u/KoderYT
Kaliya waxaan haystaa ciyaaraha pt runtii aad u hooseeya (kan ugu sarreeya waa 3k pts) waxayna kor u qaadeen qiimaha furashada- Isticmaal Reddit -u/Kimatsu
xabbad dibi ah oo soo urtay, waxaan ku noolaan jiray UK, ka dibna waxaan u soo guuray Norway, wayna i mamnuuceen. jisus christ, waa maxay nidaamka nacasnimada ah, oo waxaan u isticmaalay nacastaas 2-3 sano. oo hadda waxba ma samayn karaan. f.king polish 1diot- Эрник Rа. on Trustpilot
Waxaan $ 10 ka helay jeebka Steam oo ka yimid bixinta. Mahadsanid.- Timofey oo ku sugan Trustpilot.
Waxaan helay kaarkayga hadiyadeed ee 10 euro waxayna yiraahdaan waxaad heli doontaa kaarka hadiyadda inta u dhexeysa 3 iyo 4 toddobaad waxaan helay 2 maalmood kadib- toktokkip on Trustpilot
Guud ahaan, xirmada Ciyaartu waxay leedahay qiimeyn aaminaad leh oo ah 3.9. Dhibco aysan ku faani karin maadaama ay hoos uga dhaceen 8.4 ilaa 3.9.
Markaad tan aqbashay, waxaan sii oggolaan doonaa inaan sii ogaano sida aad uga kasban karto madalkan ciyaarta fiidiyowga ee leh astaamo badan oo fadeexad ah.
Sida loo kasbado xirmada Ciyaarta
Gamekit wuu ka duwan yahay app kale oo kaa caawiya inaad lacag hesho. Abaal -marinta aad halkan ku hesho laguma bixiyo lacag caddaan ah ee waa lacag lagu ciyaaro, kaararka hadiyadda iyo wixii la mid ah.
Si kastaba ha ahaatee, dhinaca kale ee tan ayaa ah inay kaa caawineyso inaad lacag u keydiso lacag la'aan. Tani waa sababta oo ah waxaa jira ciyaaro qaarkood oo ay tahay inaad bixiso si aad si caadi ah u hesho. Waa hagaag, xirmada ciyaarta ayaa ku siinaysa fursad aad ku ciyaarto ciyaarahaas mararka qaarkoodna, waxay kugu abaalmarin doontaa dhammaystirka hawlaha.
Sababtan awgeed, aan aragno inta aad ku kasban karto xirmada ciyaarta iyo haddii ay suurtagal tahay.
Hadda, gamekit wuxuu leeyahay sahanno dhowr ah oo lagu dhammayn karo qiyaas ahaan 17minutes.
Marka la dhammaystiro sahannadan, adeegsadayaasha waxaa lagu abaalmariyaa 174PTS. Haddii aad dhammaystiri karto sahannadan oo kale adiga oo aan kala go 'lahayn, waxaad kasban lahayd qiyaastii 580 PTS saacad kasta.
Sidoo kale, Gamekit wuxuu leeyahay in ka badan 17 milyan oo isticmaaleyaal diiwaangashan wuxuuna siiyaa abaalmarino qiimahoodu ku dhow yahay 5.5 milyan oo doollar. Isticmaalayaasha waxay ku andacoodaan inay kasbadeen kaarar hadiyadeed oo qiimahoodu yahay $ 10 muddo laba toddobaad gudahood ah.
Maadaama aad jeceshahay ciyaarista ciyaaraha fiidiyaha, waxaad sidoo kale lacag ka samayn kartaa hiwaayaddaada. Cidna ma dhaawaceysid
Sida Loogu biiro Xidhmada Ciyaarta
Haddii aad weli xiisaynayso inaad ku biirto xirmada ciyaarta, waxaad iska qori kartaa degelkooda adigoo gujinaya badhanka hoose.
Habka diiwaangelinta oo dhan waa inaysan qaadan waqti dheer - waa sahlan tahay. Waxaad gelisay cinwaankaaga iimaylka oo dooro eray sir ah, koontadaadu waa diyaar. Ama waxaad dooran kartaa inaad ku gasho koontadaada Google, Facebook, ama Steam.
Si Loogu Soo Duubo
In kasta oo aanan ku siin karin Gamekit dib -u -eegiddayda 100% maaddaama ay leedahay hoos -u -dhacyo badan marka loo eego dhinacyadeeda wanaagsan, haddana waxaan kugula talinayaa inaad iska hubiso naftaada haddii aad tahay qof jecel cayaarta.
Waxaan rajeynayaa in dib -u -eegista xirmada Ciyaarta ay ka jawaabtay su'aashaada "waa maxay Gamekit".
Haddii ay jiraan wax aad u malaynayso inaan seegnay ama aad jeclaan lahayd inaad ku darto, noo sheeg sanduuqa faallooyinka ee hoose!
Sidee bay Ibotta lacag u heshaa: Hagaha Ganacsiga oo Buuxa
Sida Loo Noolaado Shaqo La'aan & Biilasha Bilaa stress
10 Madal ee Kaarka Hadiyadeed ee Legit iyo Sida Loo Guuleysto
Dib -u -eegista Gamekit: Fadeexad Mise Jid Xalaal ah oo lagu kasbado Lacag Bilaash ah?
Dib -u -eegista GameKit: Gamekit ma yahay waddo sharci ah oo lagu kasbado abaal -marinnada Ciyaaraha Ciyaaraha?
Falanqaynta Rakuten.com 2022: Ma xalaal baa mise waa khiyaamo | Sidee U Shaqeeya
Haddii aad tahay nooca internetka ka raadiya meherado kaa caawin kara inaad keydiso ama lacag ku kasbato…
Qaraabo aan jeclahay in aan waqti la qaato, ayaa ii ballan qaaday in ay ii soo booqan doonto inta lagu jiro usbuuca dhammaadka. Ahaanshaha…
StudySoup waxay ku andacoonaysaa inay ardayda siiso isku-fiil beddelaad agab waxbarasho iyo sidoo kale fursad ay lacag ku kasbadaan…
Qof kastaa wuxuu jecel yahay kaararka hadiyadda, gaar ahaan marka ay bilaash tahay. Tani waa sababta oo ah ka baxsan maalmaha dhalashada iyo ciidaha, bilaash ah…
Nvidia Shield vs Roku Ultra: Sanduuqa Qulqulka ugu Fiican Sanadka 2022
Inta badan TV-yada casriga ah waxay leeyihiin ciyaartoy durdurro caqli badan leh oo horay loo dhisay. Laakiin dad badan ayaa wali doorbida inay adeegsadaan qulqulka kaligood ah…
Ilaaliyaha Aqoonsiga iyo Dib -u -eegista LifeLock: Keebaa kuu Fiican?
Waxaan rumeysanahay inaad la kulantay inta badan xayeysiisyada TV -ga ama aad maqashay LifeLock ama ilaaliyaha aqoonsiga. LifeLock…